6 Malyuun oo ah qalabka afka lagu daboolo oo Germany leedahay oo lagu waayey Kenya - BANDHIGA
Ku dhawaad ​​6 malyuun oo ah qalabka caafimaad ee afka iyo sanka lagu daboolo oo dhowaan Germany soo iibsaday ayaa lagu waayey gegeda diyaaradaha ee Kenya,siday uu sheegay wargayska Der Spiegel ee toddobaadlaha ee kasoo baxa Germany.
Wasaaradda gaashaandhiga ee Germany ayaa xaqiijisay in mas’uuliyiintu ay bilaabeen baadhitaan la xidhiidha dhacdadan, laakiin ma aynan bixin faahfaahin dheeraad ah.
Xukuumadda isbahaysiga ee Chancellor Angela Merkel ayaa dhawaan codsatay qalabka caafimaad ee lagu daboolo sanka iyo afka iyo qalab kale oo badbaado ah oo qiimihiisu yahay ku dhawaad ​($ 262 million) malyuun dollar, iyo agab si looga hortaggo yaraanta jirta iyada oo uu jiro faafitaanka cudurka coronavirus.
Wargayska Speigel ayaa sheegay in la filayay qalabkan inuu dalka yimaado 20-kii Mars,iyada oo shixnad qalbabka afka iyo sanka lagu xidho ee la waayayay ay kamid tahay alaabadii ugu horreysay ee la keeno loona baahan yahay si loogu xidho nidaamka caafimaadka ee Germany.
Germany ayaa ah dalka seddexaad ee sida ba’an u saameeysay masiibada coronavirus ee Yurub, kadib Italy iyo Spain.
Dalka Germany ayaa ilaa imika waxa la sheegay in laga diiwaangaliyay 30 kun iyo 150 xaaladood iyo 130 dhimasho ah Sida laga soo xigtay Xarunta John Hopkins.